I-Sunset Beach House - I-Airbnb
I-Sunset Beach House
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDavis
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uDavis iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Sunset Beach House enebhafu enamanzi ashushu nendawo yokubasa engaselwandle. Le ndlu yenzelwe intsapho kunye nabahlobo abasondeleyo, iindawo zokudlala ziza konwabela zonke iindwendwe ezincinci.
Apha uza kuva ubuhle bedolophana encinci i-Tūja kwaye wonwabele ukubona ulwandle kunye nokuzola okulindele ukutshona kwelanga ngokuhlwa.
Unethuba lokonwabela ukuhlala ngokuthula kwindlu yethu eseSunset Beach. Iyadi yendlu yenzelwe wena nentsapho yakho- elunxwemeni lolwandle, uve ubhabha lolwandle, unokonwabela ukutshona kwelanga kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi, kunye nokufudumala kwibhafu enamanzi ashushu (imali eyongezelelweyo) kunye nomlilo.
Le ndlu inefenitshala etofotofo enamagumbi okulala ayi-3, ikhothi njengoko kufuneka, amagumbi okuhlambela ayi-2, indlu yangasese eyi-1. Igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, apho abantu abayi-8 banokutya ngexesha elinye.
Ikhitshi kunye negrili zilungiselelwe ukuziphekela.
Ukongezelela kwezi zinto unokuzisebenzisa, ungajinga ekutshoneni kwelanga, ugcakamele ingca uze usele iti eshushu kwintente.
Amawa aseVeczemju avula indawo entle yokubona ubuhle beemitha eziyi-6 ubude bebhanki enesanti ebomvu apho amaza acocekileyo nemiqolomba emihle.
I-Arnis Preiss ceramics workshop inikeza ithuba lokuthenga zonke iintlobo zeemveliso zodongwe, ukufumana ulwazi malunga nokuvelisa, ukubona indlela umsebenzi owenziwa ngayo kunye nenyosi kwaye ungcamle iintlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo ezenziwe ngeentyatyambo ezahlukeneyo.
Umzila wasemaphandleni waseRandu udlula kwidolophu engaselwandle kuphela eLatvia, uvula iindawo zendalo ezingaqondakaliyo kwaye kukho ithuba lokubona izityalo nezilwanyana ezisengozini.
Izibane zeenqaba ezinesibane phezulu zeKurmrags sele zihambile, kodwa iseyindawo entle, ekwikhilomitha eyi-1 kuphela, yokuya kuyo.
Imarike ye-Skultes yenziwa yonke imihla
ukususela ngo-7:30 ukuya kutsho ngo-13: 00, kukho imvakalelo emnandi kunye neempahla zasekuhlaleni ezisecaleni kwe-coutry-imveliso yobisi, inyama, ii-berries, imifuno, intsimbi etyhefayo et al-are eza kuthengiswa.
I-Meke yibhari apho unokuzonwabisa khona ngokulula emaphandleni, uze ungcamle ukutya okuqhelekileyo kwase-latvian.
Umbuki zindwendwe ngu- Davis
Ill make sure your visit is unforgettable.
Siyazikhathalela kwaye siyazamkela ngobubele iindwendwe zethu ibe sikhangele phambili ekufumaneni uxabiso nokukhathalela kwakho.
Sifumaneka imini nobusuku, siza kufumaneka ukuze sikuncede. Ibhafu enamanzi ashushu kufuneka igcinwe kwangethuba ukuze siyilungiselele size siyikhanyise ngexesha olifunayo.
Sifumaneka imini nobusuku, siza kufumaneka uku…